November 11, 2020 - Padaethar
အလျှံပါယ်ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူ၏ လက္ခဏာပုံ
November 11, 2020 by Padaethar
အလျှံပါယ်ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူ၏ လက္ခဏာပုံ မူရင်း လက်ဝါးပုံကိုပါ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါသည် ။လက်သူကြွယ် အောက် အဖြူရောင်ဖြင့် ဝိုင်းပြသည့်ထဲကြည့်ပါက “ငါးရုပ်သင်္ကေတပုံ´´ထင်ရှားပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့ရမည်။ ငါးရုပ် သည် လက်ဝါးပြင် ၌ မည်သည့်နေရာ၌ ရှိရှိ ကောင်းကျိုး မင်္ဂလာ ကိုပေးသည်။ယခုပုံ လက်သူကြွယ် အောက်ရှိ ငါးရုပ် သည် မှန်ဘီလူး ဖြင့်ကြည့်စရာမလိုပဲ ထင်ထင်ရှားရှားပြတ်ပြတ်သားသား ပြထားသည်။ ကျွန်တော်မကြာခဏ တင်ပြခဲ့သည်မှာ…လက်သူကြွယ် အောက်ဂြိုလ်ခုံနေရာ၌ မည်သည့်အရေးကြောင်း-လမ်းကြောင်းလေးမှမရှိ ပြောင်နေသူ (သို့မဟုတ်)ပြားချပ်နိမ့်ဝင်နေသူ တို့သည် ဆင်းရဲသူ-ပစ္စည်းဥစ္စာ မရှိသူ-အခြေ ခံလူတန်းစားသာဖြစ်၏။ လူ့လောက၌…နေရာတစ်ခုခုဖြင့် အဆင်ပြေနေသူထိုက်သင့်သလောက် ပစ္စည်းဥစ္စာရှိသူကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ချမ်းသာသေူကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အောင်မြင်နေသူတို့၏လက်သူကြွယ်အောက် ဂြိုလ်ခုံသည် မင်္ဂလာ အမှတ်အသား တစ်ခုခု မုချ ဧကံပါရှိနေသည်။ ဤကား…လက္ခဏာ ပညာ ဥပဒေဿ ၏ ထူးခြားချက် … Read more
သင်​ဟာ စနေသားသမီးနဲ့ ချစ်​သူဖြစ်​​နေပီဆိုရင်​ ဂုဏ်​ယူလိုက်​ပါ​
လက်တွေ့ဆန်ဆန် ဘဝကိုပဲ နှစ်သက်တတ်ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ၏ စရိုက်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထား
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများ၏ စရိုက်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထား ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများဟာ အေးဆေးစွာနဲ့ နေတတ်တဲ့ နေ့နာမ်များပဲ ဖြစ်တယ်။ အပြင်မှာ အေးသလောက် အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင်တော့ ပျော်ပျော်နေ တတ်တယ် စကားချိုချိုနဲ့ အတည်ပေါက် စတတ်နောက်တတ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးများဟာ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် ဖြစ်အောင်ကို ကြိုးစားပြီး လုပ်တတ်တာ ဗုဒ္ဓဟူးပါ။ ကိုယ်တကယ် ဝါသနာပါတဲ့ အရာကို လုပ်ရင်လည်း အောင်မြင်တတ်သလောက် စိတ်မပါတဲ့အရာ ဆိုရင်တော့ အောက်ဆုံးထိ လက်လျော့ထားတတ်တယ်.. အလုပ် လုပ်တဲ့နေရာမှာ အင်မတန်မှ စိတ်ကူးဉာဏ် ကောင်းတယ်။ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဘယ်တော့မှ လက်မလျော့တတ်တာ ဗုဒ္ဓဟူးပါ.. ဗုဒ္ဓဟူးများဟာ မာနကို သိပ်ပြီး အလေးမထားတတ်ဘူး။ စိတ်ဆိုးအောင် လုပ်ပြီးရင်လည်း ပြန်ချော့တတ်တာ ဗုဒ္ဓဟူး။ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားထဲမှာ … Read more
စိတ်သဘောထား ကောင်းတတ်ကြတဲ့ စနေနေ့ဖွားတို့ ပင်ကိုယ် စရိုက်၊ လက္ခဏာများ
စနေ သားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်လာပီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ် ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပီဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။ ပြောချင်တဲ့ စကားကို သွယ်ဝိုက် မပြောတတ်ဘဲ တိုက်ရိုက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်တာ စနေပါ။ အစွဲအလန်းကြီးတယ်။ အမှတ်တရတွေကို သတိရနေတတ်တယ်။ ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းတဲ့လူ ဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ မမေ့တတ်ကြဘူး။ ဒေါသကြီးရင်လည်း သူများနဲ့ မတူအောင်ပါပဲ။ စိတ်ကြီးတယ် မဟုတ်မခံတတ်ဘူး။ အချိန် ခနလေးနဲ့ ဒေါသအရမ်းထွက်တတ်ပေမဲ့ ဟုန်းခနဲ ထတောက်တဲ့ မီးလိုပဲ ဒေါသတွေက ခနပဲ ကြာကြာတော့ စိတ်ထဲမထားတတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ သတ္တဝါတွေ မြင်ရင် ချစ်တတ်တယ်။ သနား တတ်တဲ့ စိတ်ထားရှိကြတယ်။မျက်နှာတည်ပီး ရင်ထဲမှာတော့ တကယ်ခင်တတ်တဲ့ စိတ်ထား စနေသားသမီးမှာ … Read more
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်သော WHOရဲ့ ကြေငြာချက်အရ သေစေတတ်သောရောဂါများအနက် လေဖြတ်ခြင်းဟာ တတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လေဖြတ်ခြင်းကို အချိန်မီသိရှိပါက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိူးတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပေမယ့်လဲ လူတော်တော်များများက အချိန်မီမသိရှိနိုင်တာမို့ စောစီးစွာ ဆေးကုသမှုခံယူချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ လေဖြတ်ခြင်းကို ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ? လေဖြတ်ခြင်းကို (၁)ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ခြင်း (၂)ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းဆိုပြီး ဆေးပညာအရ၂မျိူခွဲထားပါတယ်။ စစ်တမ်းများအရ လေဖြတ်ခြင်းရဲ့၈၀ရာနှုန်းက ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်လေဖြတ်ခြင်းဟာအဖြစ်များသလောက် အစပိုင်းတွင်ရောဂါ လက္ခဏာမပြသတာကြောင့် သိရှိဖို့လဲ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဦနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောလေဖြတ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းမှာ ဦးနှောက်ဆီသို့ သွေးစီးဆင်းသောသွေးကြောတစ်နေရာတွင် သွေးခဲဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါပိတ်ဆို့သွားသောသွေးကြောနေရာရှိ ဦးနှောက်တစ်ရှူးမှာ တဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာပြီး ဦးခေါင်းခွံအတွင်းတွင် ပိုမိုနေရာယူလာရာမှ ဦးနှောက်အတွင်းသားဖိအားမြင့်တက်လာပါတယ်။ ထိုအခါ အလွန်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ဦးနောက်တစ်ခုလုံးမှာဖိအားကိုခံစားလာရပါတယ်။ လေဖြတ်စဉ်မှာ ထိုလူရဲ့ ခြေ လက်များ လှူပ်မရနိုင်သလို သူ့ရဲ့စကားပြောအာရုံနဲ့ အကြားအာရုံတွေပါအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ တစ်ချိူ့သောလေဖြတ်ခြင်းတွေမှာဆို လူနာအနေနဲ့ ထင်ယောင်ထငိမှားတွေပါဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အချိူ့သော လေဖြတ်ခြင်းအနုစားတွေမှာ လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်ခန့် သို့မဟုတ် … Read more
သငျ လူရှေးမှားနပွေီဟု သိသာစနေိုငျသော အခကျြ
သင် လူရွေးမှားနေပြီဟု သိသာစေနိုင်သော အချက်လေးများ….
တစ်စုံတစ်ဦးက သင့် အကြောင်း တွေးနေပြီဆိုရင် ကြုံရမယ့် ထူးခြားတဲ့ နမိတ်များ…
တစ်စုံ တစ်ယောက်က သင့်အကြောင်းတွေးနေတာကို သိနိုင်မယ် ထင်လား? သိရော သိချင်လား? ခုပြောပြမယ့် အချက်တွေက သင့်အကြောင်းကို တစ်ယောက်ယောက်ကေ တွးနေတဲ့အခါ သင့်မှာ ခံစားနေရမယ့် လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကြောင်း တွေးတယ် ဆိုတာမှာ သင့်ကို ချစ်လို့ဖြစ်စေ မုန်းလို့ဖြစ်စေ တွေးနေနိုင် ပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်ကို ရန်ပြုဖို့ထိတွေးနေ တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေ ကိုသိထားတော့ သင်သတိထားနိုင်တာပေါ့. ကဲ..ဘယ်လိုတွေခံစားရမလဲ ဘာတွေလဲ ဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်.. နှာချေခြင်း ဒီယုံကြည်မှု ကတော့ အာရှနိုင်ငံတွေ မှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ယုံကြည်မှုလေးပါနော်..တစ်စုံ တစ်ဦးက သင့်အကြောင်းတွေးနေတဲ့ အခါ သင့်နှာခေါင်းဟာ ယားယံစပြုလာပြီး မကြာခင် ထပ်ခါထပ်ခါနှာချေမှု ကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒါကနေမကောင်းတဲ့ အချိန်အတွက်တော့ အကျုံးမဝင်ပါဘူးနော်။ အအေးပတ်တာလည်း မရှိ နှာခေါင်းယားယံလောက်အောင် ရှုရှိုက် စရာလည်း … Read more
လမ်းပေါ်မှာ အောင်ပွဲခံနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးအတွက် ကိုဗစ်လူနာသူနာပြုဆရာမလေးရဲ့ ရင်ထဲကစကား
လမ်းပေါ်မှာ အောင်ပွဲခံနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးအတွက် ကိုဗစ်လူနာသူနာပြုဆရာမလေးရဲ့ ရင်ထဲကစကား ကျွန်မသာ ခုချိန် လူနာအဖြစ်နဲ့ ဆေးရုံပေါ်မှာ ရှိမနေခဲ့ဘူး ဆိုရင်… Scrub Suit လေးဝတ် ဝန်ထမ်းကတ်လေး အိတ်ထဲထည့်ပြီး အောင်ပွဲခံနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးဆီ ကားတန်းတွေဆီ ..အရောက်သွားမိမှာ သေချာတယ်… ပြီးရင် ကိုဗစ် ကာလမှာ ကျွန်မတို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို သနားဖို့ရယ်… မနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးစနစ်ကို ထောက်ထားဖို့ရယ်… ကိုယ့်ကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရနိုင်တဲ့ ချစ်ရသူတွေကို ထောက်ထားဖို့ရယ်.. အဲလိုလေးတွေ စဉ်းစားပေးပြီး ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာပဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူ အောင်ပွဲခံပါလို့….အားလုံးကို တောင်းပန် နားချ တရားဟောနေမိမယ်ထင်ပါရဲ့…. ဝန်ထမ်းကတ်လေး ထည့်သွားမှာက scrub suit နဲ့လာတာတောင် မင်းက ဘာမို့လဲ လို့ မေးလာရင် ကိုရီယားကားတွေထဲက စုံထောက်ရဲမေတွေလို … Read more